#Oduu_Ammee Gamtaan Afrikaa Mana HD ABO deeman ugguramanii akka deebi’an taasifaman. – Kichuu
HomeNewsWorld#Oduu_Ammee Gamtaan Afrikaa Mana HD ABO deeman ugguramanii akka deebi’an taasifaman.
Gamtaan Afrikaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa nageenyi isaanii maal irra akka jiran dubbisuuf jilli Gamtaa Afrikaa bakka bu’ee gara mana jireenyaa HD imalee ture waraana Naannoo mana jireenyaa HD jiraniin akka dubbisuu hin dandeenye dhorkamuun akka deebifaman taasifamaniiru.
Akka maddi odeessa keenyaa jedhutti Waraanni Mana jireenyaa HD ABO jaal Daawud bira jiru Xalayaa Mootummaa irraa kan ittiin seentanii dubbistan hanga fiddan isin hin seensifnu jechuun akka deebifaman taasifamaniiru.
HDn ABO jaal Daawud Ibsaa erga ebla 1/2021 irraa qabanii mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramanii kan jiran yoo tahu Caamsaa 3/2021 halkan keessaa hoomaan waraanaa mana isaanii itti cabsanii erga seenanii booda qabeenyaa mana isaanii keessa jiru Huccuu dabalatee saamanii bahuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa haala Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaan itti jiran ilaaluuf deemnan poolisii federaalaatin dhorkaman.
Caamsaa 3/2021 halkan walakkaa qaamonni nageenyaa PP mooraa mana jireenyaa Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa seeraan ala cabsanii erga seenanii haga ammaatti mooraa marsanii kaan mooraa keessa jiru. Qabeenyi saamamee namoonni mooraa sana jiraatanis reebamaniiru.Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gara mana jireenyaa Hayyu Duree deemuudhaan haala Jaal Daawud Ibsaa itti jiran hubachuu deemanii isaanis waraana PP balbalarra jiraniin dhorkamani.Mooraa mana jireenyaa Hayyu Duree haga ammaatti eenyuyyu seenuu hin dandeenye. Haalli isaan keessa jiran kan ibsu odeessi argame hin jiru.